'Gadaa koo keessatti Oromoon hunduu ni bilisooma' - BBC News Afaan Oromoo
Gadaan Tuulamaa sirna baallii dabarsuu Fulbaana keessa jala bultii Ayyaana Irreechaa Hora Arsadiitti gaggeeffamuuf hojjechaa jira.
Gogeessi Birmajii saddeeta tokko dura Roobaleerraa baallii fuudhe Melbaa/Horataatti dabarsa. Kanaaf Melbaan Abbaa Gadaa Miidhaksoo Gurmuu dhiyeeffateera.
Namni Gadaa of harkaa qabu hanga fedhe beekaa ta'ellee seerri eegamee waggaa saddeet saddeetiin aangoo walitti dabarsina jedhu Abbaan Gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sambatoo.
"Gadaan keenya bu'aa ba'ii qaba ture, haa ta'u malee, namuu ilaaluun himuu kan danda'u milkii qaba jenna," jedhu.
Bara Gadaa isaanii Oromoon baddaafi lagan walqooduu dhiisuu, tokkummaa abbootii gadaa hundeeffatuu, bakkawwan sirni gadaa itti laafee turettis deebisee jabeeffatu akka milkaa'ina gadaa isaaniitti dubbatu.
Kanaaf, fakkeenyi Gadaa Iluu, warra Salaalee, Harargeetti kan Bultum akkasumas Tuulama keessattis bakka gara garaatti deebi'ee jabaateera jedhan.
Abbaa Gadaa Bayyaanaa Gogeessa Gadaa Birmajii akka turan ibsanii ammaa Gogeessa Gadaa Meelbaa/Horatatti dabarsuu isaanii ibsan.
Baallii kan walitti kennan Fulbaana keessa jala bultii Ayyaana Irrechaa Hora Arsadiitti ta'uu kaasuun, isa dura garuu Abbaan Gadaa beekamuun dirqama jedhan.
Kanaaf jedhan, Abbaan Gadaa Bayyanaa, Abbaan Gadaa Horataa beekamee Wixata darbe barcuma Saglan Yaa'ii filateera jedhu.
"Nuti Gadaan Birmajii ammoo haala mijeessituudha. Gadaan gadaa hin dhiibdu, qixa qaba Gadaan shananuu," jedhan.
Yeroo Gadaa dabarsan maal maal akka dabarsan ykn maal maal akka dhaammatan gaafatamanii Abbaan Gadaa Bayyanaa, Gadaa akkuma jiruun hin dabarsistu jedhan.
"Alangeen kiyyaa gaarri keeti jedha. Alangeen kiyyaa alangeen siif kenna jedhu. Baallii tokko ambifatee baallii tokko kenna. Akkuma duraan Gadaa Roobaleerraa eebbaan fudhanne, eebbaan kennina," jedhu.
Gadaa Melbaa/Horataarraa kan dhiyaatan Abbaa Gadaa Miidhaksoo Gurmuu, ammatti Baallii walirraa akka hin fuune ibsanii Gadaan kan isaanii, Melbaan, akka isaaniin dhiyeeffatan dubbatu.
"Abbaan Gadaa Birmajii erga baallii natti kennee booda imaanaa hunda natti dabarsa," jedhu.
Abbaan Gadaa Miidhaksoon Gadaa Roobaleerraa jalqabanii kan Birmajii marsaa isaa obbaafataa jiru dabalatee muuxannoo kuufataa akka dhufan dubbatanii.
Beekumsa ganna kudha ja'a waan argataniif kan akaakayyuufi akaakilee isaaniirraa fudhatanitti dabaluun itti gaafatamummaa isaanii akka ba'an kan isaan gargaaru ta'uu ibsan.
Carraa yeroo ammaa Oromoon tokkummaa cimsataa jiru kanaan kan Gadaa jalatti bulu Oromoo qofaa osoo hin taane, addunyaan Sirna Gadaatiin bulla jechaa jira waan ta'eef qabsoo baay'ee barbaachisas jedhu.
"Gadaa koo keessatti Oromoon hundumtuu ni bilisooma, warra kaanillee ni bilisoomsu hin shakkiinaa," jedhan Abbaan Gadaa Melbaa Miidhaksoo Gurmuu.
Oromoon bara dhufaa darbaa Sirna Gadaa ittiin bulu karaa dimokiraatawaa ta'een aangoo walitti dabarsa.
Gadaan umuriifi dhalootaan kan ijaarame ta'ee sirni siyaasaa, dinagdeefi hawwaasummaan Oromoo ittiin murteeffamu; mirgaafi dirqama isaa beekee ittiin walii galuufi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha.
Kuusaa Fakkii Irreechi Arfaasaa Awustiraaliyaa, Melbarniitti kabajame